And then , if you sa - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: and then , if you saw , (Englisch - Burmesisch)
if you are sick, do not work.
သင် နာမကျန်းဖြစ်နေပါက အလုပ်မလုပ်ပါနှင့်။
but if you have the cough
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားမှာ ချောင်းဆိုးနေခဲ့ရင်
if you want to work, we support you.
သင် အလုပ်လုပ်လိုပါက မိမိတို့ သင့်ကို ပံ့ပိုးသည်။
if you continue to have high fevers
ခင်ဗျားမှာ အဖျားကြီးတာ ဆက်ရှိနေမယ် ဆိုရင်
or if you have high blood pressure
ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျားမှာ သွေးတိုးရှိသလား
if you guessed “c,” you got it.
သင် အဖြေ (ဂ) ကို မှန်းလိုက်ပါသလား။
if you need to dial back, that’s okay.
သင်ဖုန်းပြန်ခေါ်ရန် လိုအပ်ပါက အဆင်ပြေပါသည်။
this includes if you are sick and unable to work.
ယင်းတွင် သင်သည် နာမကျန်းဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရန် မသင့်ကြောင်း ‌ပြောသည်။
if you do wearamask, make sure to use it correctly.
နှာခေါင်းစည်း ဝတ်သည့်အခါ သေချာ ဝတ်ဆင်ပေးပါ။
ထိုအခါ သူတပါးက၊ ဤအရပ်၌ ခရစ်တော်ရှိသည်၊ ထိုအရပ်၌ရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်းမယုံကြနှင့်။
if you do touch it, wash your hands immediately afterwards.
အကယ်၍ သင်အနေဖြင့် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မိခဲ့ပါက ထိတွေ့ပြီးနောက်ချက်ချင်း သင်၏ လက်များအား ဆေးကြောပါ။
ထိုအခါ သူတပါးက ဤအရပ်၌ ခရစ်တော်ရှိသည်၊ ထိုအရပ်၌ရှိသည်ဟု ဆိုသော်လည်းမယုံကြနှင့်။
ထိုသို့လျှောက်ကြသောအခါ သင်တို့ကို ငါအလျင်းမသိ၊ အဓမ္မအမှုကို ပြုသောသူတို့၊ ငါ့ထံမှ ဖယ်ကြဟု ထိုသူတို့အား အတည့်အလင်း ငါပြောမည်။
select if you want to search among image files only
select if you want to search among audio files only
select if you want to search among video files only
remove it from the back, throw it away, and then wash your hands.
၎င်းကို နောက်ကျောဘက်မှ ချွတ်ပြီး အဝေးသို့ လွှင့်ပစ်ပါ။ ထို့နောက် သင့်လက်များကို ဆေးကြောပါ။
if you haveafever ofahundred and two or higher
အဖျား ၁၀၂ နဲ့ အထက် ရှိတယ် ဆိုရင်
quiero tenerte en mi corazon (Spanisch>Englisch)tripoli (Dänisch>Spanisch)found you (Englisch>Telugu)which did you say he was there (Englisch>Hindi)naramdaman mo ba (Tagalog>Englisch)universitet (Deutsch>Englisch)communicant (Latein>Deutsch)piskarala (Serbisch>Bulgarisch)cara (Indonesisch>Griechisch)hoy you (Englisch>Russisch)ang talambuhay (Englisch>Tagalog)seroloģiskajam (Lettisch>Tschechisch)story of mastram (Englisch>Hindi)l (Bengali>Griechisch)sawadika kapunka (Thai>Englisch)schedule (Englisch>Griechisch)multi silaba (Englisch>Tagalog)sojaproductie (Holländisch>Französisch)pani tanchai (Hindi>Englisch)per nasum (Latein>Englisch)mucho bella (Spanisch>Französisch)volume (Portugiesisch>Spanisch)geschlechtsspezifisch (Deutsch>Dänisch)no che cosa dici (Italienisch>Englisch)naputol na ugat sa kamay (Tagalog>Englisch)